नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): BBC ले तयार पारेको नेपाल सम्बन्धी यो बिशेष डकुमेन्ट्री हेर्दा अमेरिका भएपनि आज नेपाल मै भए जस्तो लाग्यो हेर्नुस त !
BBC ले तयार पारेको नेपाल सम्बन्धी यो बिशेष डकुमेन्ट्री हेर्दा अमेरिका भएपनि आज नेपाल मै भए जस्तो लाग्यो हेर्नुस त !
यो भिडियोले नेपालका धेरै कुरालाई जस्ताको तस्तै मात्रै प्रस्तुत गरेको छैन, सत्तामा जाने र जनता लुट्ने नेताहरुको सक्कली अनुहारलाई पनि छर्लँग बनाइदिएको छ । कहाँ छ सरकार ? प्रश्न पनि उठाइदिएको छ !